General Knowledge Archives - Page 97 of 105 - Lifestyle Myanmar
အခြိနျတိုငျး အထီးကနျြနတေယျလို့ ခံစားနရေရငျ သငျအမှတျရနသေငျ့တဲ့ အရာ (၅) ခကျြ
အထီးကျန်ခြင်းဟာ တကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုပါ။ ဒီလိုခံစားချက်ကသင့်ကို မပျော်ရွင်မှုတွေရယ် စိတ်ညစ်မှုတွေရယ် ရရှိစေပြီး ဘာကြောင့်ယခုလို ခံစားနေရတယ် ဆိုတာကိုလည်း အဖြေရှာဖို့ဆိုတာလည်း သင့်အတွက်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အထီးကျန်ခြင်းဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်းရဲ့ အတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီး နားလည်မှုလွဲတဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ သို့မဟုတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ပျက်မှုတွေ သို့မဟုတ် အခြားသူတွေကို စိတ်ပျက်စေမှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အထီးကျန်ခြင်းအလယ်မှာ သင်ရောက်နေခဲ့ရင် အကူအညီဖြစ်စေနိုင်ဖို့ မှတ်မိနေရမယ့် အရာတွေရှိပါတယ်။ ဒီအရာတွေက သင့်ကိုအကောင်းမြင်ခြင်းကို...
မနာလိုဖွဈနတေဲ့ လူတဈယောကျရဲ့ လက်ခဏာ (၇)ခကျြနဲ့ ရှာငျရှားဖို့အတှကျ နညျးလမျးမြား
မမျှော်လင့်ပဲ သင့်အပေါ်မနာလိုစိတ် ဖြစ်သူတွေကိုတွေ့ရင် သင်အံ့သြတတ်လား? မအံ့သြပါနဲ့၊ မနာလိုစိတ်ဟာ သင်အယုံကြည်ရဆုံး သူငယ်ချင်းဆီမှာတောင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်မပြတတ်တဲ့ မနာလိုစိတ်ကို သိအောင်ရှာဖွေဖို့အတွက် ယခုဖော်ပြမယ့် လက္ခဏာ (၇)ချက်က သင့်ကိုအထောက်အကူပြုပေးမှာပါ။ မနာလိုစိတ်ဟာ ပြုသူရောဖြစ်သူရော အရမ်းကိုစိတ်ပင်ပန်းရပြီး အမုန်းဖွဲ့စေတတ်တာကြောင့် ရှောင်ရှားသင့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက် သူတို့ပျော်ရွင်မှုကို မခံစားရဘူး ပထမဆုံးသိနိုင်တဲ့လက္ခဏာက သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို မနာလိုဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ကသင့်အောင်မြင်မှုအပေါ် ချီးမွန်းတဲ့အခါအလွဲလွဲအမှားမှားတွေ...
သငျ့ရဲ့ အာရုံစူးစိုကျမှု ဘယျလောကျအားကောငျးလဲ ပဟဠေိအနနေဲ့ စမျးသပျကွညျ့မယျနျော။
သင်က အာရုံစူးစိုက်ပြီး မျက်စိလျင်တဲ့သူဆို ပေးထားတဲ့ ပုံ ၁၀ပုံထဲက မတူတဲ့ အချက်တွေကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရှာတွေ့နိုင်မှာပါ။ ကဲ ရှာတွေ့ပြီဆို Comment မှာ Screen shot ရိုက်ပြခဲ့နော်။ ဒီကြောင်တွေအားလုံးထဲမှာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ကြောင်တစ်ကြောင်ရှိပါတယ်။ ဒီစုံတွဲပုံတွေထဲမှာ တစ်တွဲကတော့ အခြားသူတွေနဲ့ မတူတဲ့ အမူအရာတစ်မျိုးနဲ့ ရှိနေပါတယ်။ တန်းလျားမှာ ထိုင်နေတဲ့ အတွဲတွေထဲကမှာ မတူညီတဲ့ အတွဲတစ်တွဲကို သင်သာမျက်စိလျင်ပြီး...
အစားအသောကျပကျြခွငျးကို သဘာဝအတိုငျး ပြောကျကငျးစနေိုငျတဲ့ နညျးလမျးကောငျးမြား
အစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းခြင်းဟာ လူတိုင်းဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာမြောက်မြားစွာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအစားအသောက်ပျက်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ဖို့အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တဲ့ အရာတွေကနေတဆင့် အစာစားချင်စိတ်တိုးပွားလာအောင် ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ၁။ ဇီဖြူသီးအရည်ကို သံပုရာရည်၊ ပျားရည်နဲ့ အတူတူရောစပ်ပြီး သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အစာစားချင်စိတ်ကို ပိုပြီးအားကောင်းစေပါတယ်။ ၂။ သင်နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ချင်း(ဂျင်း) ကို များသထက်များအောင် ထည့်ပြီးစားသုံးပေးပါ။...
အမြိုးသမီးတိုငျး ကွုံတှရေ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ အခကျအခဲ ပွဿနာအခြို့
ခေါင်းလျှော်ပြီးရင် ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံက တစ်ခြားစီပါ။ Youtube က အလှပြင်တဲ့ ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီး အပြည်မှာ ပြင်ကြည့်တဲ့အခါ ခေါင်းလေးတစ်ခါဖြီးလိုက်တာနဲ့ အားအင်းတွေ ကုန်ခမ်းသွားမတတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အတူတူဝယ်ထားပေမဲ့ Shampoo ထက် Conditioner က ပိုပြီး ကုန်စေပါတယ်။ အကျီ င်္လှလှလေးတွေ ဝတ်ချင်ပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အချိုးအစားအစားမကျတော့ ဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တဲ့ မိတ်ကပ်လေး ဒီလိုဖြစ်သွားရင် အာ့နေ့က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဝမ်းနည်းဆုံးနေ့တစ်နေ့ပါပဲ။ bra...
အိမျမှုကိစ်စတှနေဲ့ပဲ သငျ့အားလပျခြိနျကို မကုနျဆုံးစဖေို့ အသုံးဝငျမယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ
သင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်တွေကို အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ရင်းနဲ့ အချိန်မကုန်စေဖို့ အသုံးဝင်မယ့်နည်းလမ်းလေးများကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေက သင့်အတွက် အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ၁။ အဝတ်တွေကို နှင်းပွင့်လေးလို ဖြူဖွေးစေဖို့ အင်္ကျီအဖြူတွေ လျှော်တဲ့အခါ အဝတ်လျှော်စက်ထဲကို aspirin (အက်စပရင်ဆေးပြား) များများလေးထည့်ပေးပါ။ ဒါက အဝတ်အဟောင်းတွေကိုတောင် ပြန်လည် ဖြူဖွေးစေပါလိမ့်မယ်။ သင့်အဝတ်အစားတွေကို မလျှော်ခင် အက်စပရင်ဆေးနဲ့ စိမ်ထားရင်လည်း အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။...
ကိုယျ့ရဲ့ ခွံလေးထဲမှာ အနုပညာမွောကျစှာ အလှဆငျနိုငျဖို့အတှကျ အိုငျဒီယာအခြို့
အသက်ရှည်ချင်လျှင် သစ်ပင်စိုက်ပါဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ခြံဝန်းထဲမှာ ပန်းစိုက်ခြင်း အလှဆင်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာစေသလို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အမြင်မှာလည်း တင့်တယ်လှပစေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခြံဝန်းဟာ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ပျော်စရာနေရာလေး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် သင်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှုလေးတွေတော့ လိုအပ်တာပေါ့။ ကိုယ်တိုင်အလှဆင်ထားတဲ့ ခြံဝန်းထဲမှာ မနက်ခင်းကော်ဖီသောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ညနေခင်းမိသားစုနဲ့အတူတူ အပန်းဖြေတာပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းကိုစိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းနေမှာပါ။ ဒီလိုအလေ့အကျင့်လေးတွေကို သားသမီးတွေကိုပါ ပျိုးထောင်ပေးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ခြံဝန်းထဲမှာ အလှဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် အကြံဥာဏ်အချို့ကို...
အခွားသူတှနေဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ပိုမိုအဆငျပွစေဖေို့အတှကျ နညျးလမျး (၆) ခကျြ
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်ခြင်းဟာ ဘဝကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး တိုးတက်ဖို့အတွက် လမ်းစတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းသင်းနိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ၁။ သင့်ရဲ့ body language ကို အာရုံစိုက်ပါ စကားပြောတဲ့အခါ ခြေလက်အမူအယာရဲ့ အကူအညီကိုယူပြီး ပြောဆိုတတ်ခြင်းဟာ အခြားသူတွေကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစေနိုင်ပြီး ပိုလေးနက်စေပါတယ်။ အခြားသူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာ သင့်ရဲ့မျက်လုံးတွေက ဖုန်းဆီမှာပဲရောက်မနေသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်ပြောမယ့်သူကို တည့်တည့်ကြီးကြီး စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ ပြောဆိုပါ။ ကိုယ်လက်အမူအယာကို အသုံးပြုပြီးပြောတတ်တဲ့...
လူအနညျးငယျသာ သိထားကွတဲ့ အာလူးကို အသုံးပွုပုံ နညျးလမျး ၁၁မြိုး
ကျွန်မတို့သည် အာလူးကို ဘယ်လိုအရသာရှိအောင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ချက်ပြုတ်နိုင်မလဲဆိုတာ သိထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအာလူးကို ငွေထည်တွေ သန့်ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတာ၊ ချိုင်းကြားကို ဖြူဝင်းစေတယ်ဆိုတာကို သတိမထားမိကြပါဘူး။ အာလူးကို ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမဟုတ် တခြားနေရာတွေမှာ သုံးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ ။ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးလို့ရသေးလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ ၁။ သံချေးတွေကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားလို့ရပါတယ် သင့်ဒယ်အိုးတွေမှာ သံချေးတတ်နေရင် အာလူးက အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။...
ဖွတျထားတဲ့ပနျးတှကေို ကွာရှညျလတျဆတျနစေဖေို့ ထိနျးသိမျးနိုငျတဲ့နညျးလမျး
အိမ်မှာ ဘုရားပန်းအိုး၊ အလှပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ ရာသီဥတုပူတာကြောင့် ပန်းတွေကကြာရှည်မခံပဲ ညှိုးသွားတတ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေများတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ကြာရှည်လတ်ဆတ်စေမယ့် ပန်းထိုးနည်းလေးကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ ၁။အ၀ကျယ်ပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ အိုးအလွတ်ထဲမှာ ပန်းပွင့်ကိုထည့်ပါ။ အမြဲတမ်းသန့်ရှင်းတဲ့ အိုးကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီနည်းလမ်းက ဘက်တီးရီးယားနှင့် တခြားသေးငယ်တဲ့ ဇီဝသက်ရှိတွေ ပန်းပွင့်ကို ပွားများကူးစက်ခြင်းရဲ့ အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ ပန်းတွေမကျပ်ညှပ်စေဖို့ ကျယ်ပြန့်ပြီး အ၀ကျယ်တဲ့ ပန်းအိုးကိုရွေးချယ်ပါ။ ၂။...
Page 97 of 105 Prev 1 … 96 97 98 … 105 Next